Honor 8X စီးရီးသည်စမတ်ဖုန်း ၁၅ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့သည် Androidsis
Honor 8X စီးရီးသည်စမတ်ဖုန်း ၁၅ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့သည်
Honor သည်ဈေးကွက်တွင်အလွန်လူကြိုက်များပြီးများသောအားဖြင့်၎င်းသည် Samsung နှင့် Apple တို့ပြီးလျှင်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သည့် Huawei နှင့်အတူတကွလက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီကုမ္ပဏီကစတင်ခဲ့သည် ဂုဏ်ပြု 8X နှင့် 8X မက်စ် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်စက်တင်ဘာလ၏အစမှာ။ ထိုအချိန်မှစ၍ များစွာသောသူတို့သည်ဤအမှတ်တံဆိပ်၏နောက်လိုက်များဖြစ်ခဲ့ပြီးအလယ်အလတ်တန်းစားထုတ်ကုန်နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကိုဝယ်ယူရန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြခြင်းကြောင့်စီးရီးများဝယ်ယူမှု ၁၅ သန်းကိုထပ်မံတိုးချဲ့လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီကဆိုသည်။
ဒီသတင်းကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ဂုဏ်ပြုဒုဥက္ကPresident္ဌ Xiong Junmin အလုပ်အမှုဆောင်ကမနေ့ကကတည်းက Honor 8X စီးရီးသည်ရောင်းရငွေယူနစ် ၁၅ သန်း၏အတားအဆီးကိုကျော်လွန်ခဲ့သည်။ ယင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၏အထက်ပါလတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောကြောင့်ကုမ္ပဏီသည်ဤကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရရှိရန်အချိန်ကာလ ၉ လသာရှိသေးသည်၊ ယင်းသည်စားသုံးသူများထံမှရရှိသောကောင်းမွန်သော about ည့်ခံမှုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားများစွာပြောပြသည်။
Junmin က ၆၃ နှစ်အောက် ၁၇၃ ရက်တွင်စီးရီးစီးရေ ၁၀ သန်းကိုရောင်းချခဲ့ပြီး၎င်းသည်အောင်မြင်မှုရရှိရန်အတွက်အမှတ်တံဆိပ်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ထို့အပြင်ယခုနှစ် ၆၁၈ ပွဲတော်နှင့်ပွဲတော်အတွင်း၌၎င်းသည်အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည် လေးလဆက်တိုက်အွန်လိုင်းအရောင်းချန်ပီယံ.
Honor Band5သည် Honor 9X နှင့်အတူရောက်လာမည်
သို့သော်စီးရီးများ၏ထုတ်ကုန်များ၏ရောင်းအားစီးဆင်းမှုမှာလျော့နည်းသွားနိုင်ပြီး၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် မကြာမီရောက်ရှိလာတော့မည့် 9X Pro နှင့်အတူ Honor 9X; ငါဖြစ်ကောင်းဇူလိုင်လ 23 ရက်နေ့တွင်, ဤဝေးစမတ်ဖုန်းအသစ်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များအပေါငျးတို့သသိကြလိမ့်မည်သည့်ရက်စွဲတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။ လတ်တလောကောလာဟလများကကျွန်ုပ်တို့အားဤသို့ပြောခဲ့သည် Kirin 810 ကို 9X Pro တွင်တပ်ဆင်ထားသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Honor 8X စီးရီးသည်စမတ်ဖုန်း ၁၅ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့သည်
Huawei Mate X သည်ပိုမိုနီးကပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ခေါက်ထားသည့်စမတ်ဖုန်း၏အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပိုစတာအသစ်ပေါ်လာသည်
Nokia 2.2 ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်တရားဝင်ရောင်းချသည်